Ngaba ufuna "ukunciphisa" ixesha lakho lokuthena? Ngaba ufuna ukusebenza ngokufanelekileyo egadini kwaye ube nemveliso yomgangatho ophezulu? Nokuba ungumlimi wasekhaya onesityalo nje esinye kwikhabhathi yakho okanye ifama yeehektare ezininzi eneentlobo ngeentlobo, la macebiso kunye namaqhinga aya kuba luncedo. ...
Iintente zokulima zityalwa ukunceda abalimi ukuvuna izityalo kumaqondo obushushu afanelekileyo
Ukuphepha amaqondo okushisa aphezulu ngumngeni ojongene nabalimi abaninzi bangaphakathi, nangona ingxaki inokujongwa ngeendlela ezahlukeneyo. Nazi ezinye zezona ndlela zisebenzayo onokuthi ugcine ubushushu obugqibeleleyo kwintente yakho ekhulayo yokukhula kwezityalo. Ikharbhon dayoksayidi Njenge...
Izibane zangaphakathi – Amandla vs
Nazi izibane ozidingayo ukuze ufumane izityalo ezisemgangathweni ngexesha elifutshane kakhulu: Isibane sokukhula okukhokelayo Zilula kakhulu ukuseta kwaye ezincinci ziplagi kwaye zidlale. Emva kokuzincamathela eludongeni, ungazixhoma phezu kwezityalo. Ukuba ufuna ukuseta olulula ukwandisa isivuno sakho sesityalo, uya...